भोट हाल्न मतदाता परिचय–पत्र वा नागरिकता चाहिन्छ : रमा पन्त – GoodnewsKhabar
भोट हाल्न मतदाता परिचय–पत्र वा नागरिकता चाहिन्छ : रमा पन्त
‘अधिकारको कुरा हो, भोट हाल्दिन भन्नुहुन्छ्, कुनै मतदाताले भने के गर्न सकिन्छ र ।’
गुडन्यूज खबर । २०७९ बैशाख ४, आईतवार १३:३६
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ आउन अब ३ साता जति बाँकी छ । निर्वाचन हुने मिति बैशाख ३० जति नजिक आउँछ्, निर्वाचनका गतिविधि पनि तिब्र पारिदै गएका छन । यसपालि स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता सगैं मतदान स्थल, केन्द्रको संख्या पनि बढाईएको छ । बाँकेमा मात्रै १ सय ३६ मतदान स्थल, ३ सय ७९ मतदान केन्द्र र ३ लाख २९ हजार ४ सय ७३ जना मतदाता संख्या रहेको छ । यसैगरी ७ जना अन्य मतदाता छन । बाँकेका ८ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा छन । यसै बिषयमा पत्रकार प्रेम विश्वकर्माले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमा पन्त सँग निर्वाचन बिशेष कुराकानी गर्नुभएको छ।
१. आम मतदाताले आफनो मत (भोट) खसाल्नु अघि केके कुरामा ध्यान दिनु आवाश्यक छ ?
सबैभन्दा पहिले मतपत्र लिईसकेपछि राम्ररी हेर्ने । आफुले कसलाई, कुन चुनाव चिन्हमा मत हाल्ने हो, सोबारेमा निश्चित गरी सकेपछि अनि स्वस्तिक छाप घेरा भन्दा भित्रै लगाउनु पर्छ ।
चुनाव चिन्हमा छोएमा केही हुदैन तर तोकिएको घेराभन्दा बाहिर स्वस्तिक छाप हानियो भने त्यो मत बदर हुन जान्छ । र पट्याउदा खेरी पनि मतपत्रको अर्को चुनाव चिन्हमा मसी नलाग्ने गरी पट्याउनु पर्छ । भोट हाल्दाखेरी आत्तिनु हुदैन ।
२. यसपालि मतपत्र कस्तो छ ?
विगतको भन्दा यसपटक मतपत्रको रंग (कलर) एकै किसिमको छ । मतपत्र २२ लहर र ३४ लहरको छ । हाम्रो यहाँ बाँकेमा हुन सक्छ ४० बढी लहरको मत्रपत्र, चुनाव चिन्ह अनुसार ।
३. एक मतदाता कति ठाउँ, कति वटा मतपेटिका (बाकस) सम्म पुग्नुपर्छ ?
हजुर, स्थानीय तहको चुनाव भएकाले एउटै बाकस र एकै ठाउँमा गए हुन्छ । संसद र प्रदेशको जस्तो होइन ।
४. अनि बाँके जिल्लामा मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, मतदाताको संख्या कति हो ?
पहिलेको तुलनामा मतदान केन्द्र बढेको छ । मतदान स्थल संख्या १३६ र मतदान केन्द्र संख्या ३७९ वटा रहेकोे छ । बाँकेमा हाम्रो मतदाता संख्या चाँही ३ लाख २९ हजार ४ सय ७३ जना छन अहिले ।
जसमा महिला १ लाख ६२ हजार १ सय १७ जना र पुरुष १ लाख ६७ हजार ३ सय ४९ जना रहेका छन । यसैगरी अन्य मतदाता संख्या भने ७ जना रहेका छन । पालिका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकामा मतदाता संख्या ५६ हजार ७ सय ९७ जना हुनुहुन्छ ।
खजुरा गाउँपालिकामा ३७ हजार २ सय ६४ जना हुनुहुन्छ । जानकी गाउँपालिकामा २२ हजार ९ सय २९ जना, डुडुवा गाउँपालिकामा २२ हजार २ सय ५५ जना, नरैनापुर गाउँपालिकामा १८ हजार ५ सय ९९ जना, नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा ८१ हजार ७ सय ९४ जना, बैजनाथ गाउँपालिकामा ४५ हजार १ सय २३ जना र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ४४ हजार ८ सय १२ जना हुनुहुन्छ ।
५. भनेपछि बाँकेमा सबैभन्दा बढी मतदाता भएको पालिका कुन हो ?
नेपालगंज उपमहानगरपालिका, त्यसपछि कोहलपुर र अन्य पालिका छन ।
६. अनि कोही मतदाताले म भोट दिन्न, मतदान गर्न जान्न भन्न पाउँछ की पाउदैन ?
भोट हाल्ने त, आम मतदाताको अधिकार हो । त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुन हुन्न, त्यस कारण पनि पक्कै पनि सबै मतदाताले भोट हाल्नु नै पर्छ । कतिपय सन्र्दभमा एक भोटले पनि हार जीत हुन्छ ।
मतदातालाई कुनै किसिमको दबाब, लोप देखाएर, अथवा फाइदा हेरेर भन्दा पनि आफुले इच्छाएको राजनीतिक दल, उम्मेदवारलाई मत दिने हो । र, मत भोट दिन्न भन्ने कुरा मतदाताको स्वइच्छाको कुरा हो । उहाँको अधिकारको कुरा हो, भोट हाल्दिन भन्नुहुन्छ्, कुनै मतदाताले भने के गर्न सकिन्छ र ।
७. भोट (मत) खसाल्न आउँदा केके कागजपत्र चाहिन्छ ?
पुरानै मतदाता परिचय पत्र भएहुन्छ्, कतिले हरायो भनेर निवेदन दिनुभएको होला । कतिले नयाँ पाउनुभयो होला । नपाएकोले पाउँनुहुन्छ । र अर्को भोटर लिष्टमा नाम भएको आधारमा मतदाताको नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएर पनि मत हाल्न पाइन्छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा पनि आयोगले यस्तो ब्यवस्था गरेको थियो । मतदाता परिचय पत्र अथवा नागरिकता बोकेर भोट हाल्ने गए हुन्छ ।
८. निर्वाचन सम्बन्धी अन्य केही कुरा बुझ्न पर्यो भने के गर्ने ?
निर्वाचन आयोगका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका कार्यालय, वेवसाइटबाट जानकारी लिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ सम्बन्धी जानकारीका लागी निशुल्क टोल फ्री नम्बर ११०२ संञ्चालनमा ल्याएको छ । कुनै जानकारी चाहिएमा वा जिज्ञासा भएमा सम्र्पक गर्न सकिन्छ ।
९. राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरुलाई केही भन्नु छ ?
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खडा हुदैछ, यही ८ गतेबाट । उहाँहरुको तालिम समापन भइसकेको छ । कार्यालय खडा भएपछि मनोनय दर्ता शुरु हुन्छ ।
चुनाव चिन्ह पाईसकेपछि राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरुले मतदाता शिक्षा सगैं आफना योजनाहरु लिएर जनता माझमा जानुहुन्छ । मतदान केन्द्रहरुमा होहल्ला नगरी दिएर जनताहरुलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
१०. अनि आचारसंहिताको कुरा ?
यसबारेमा, भन्नु पर्दा आचारसंहिता सबैले पालना गर्नुपर्दछ । आयोग र कर्मचारीहरुलाई मात्र भन्ने हुन्न । राजनीतिक दल, संञ्चारमाध्यम, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी लगायत जनताले पनि गर्नुपर्छ ।
आचारसंहिता पालना गर्नु भनेको एउटा अनुशासनमा रहेर चुनाव गर्नु गराउनु हो । आचारसंहिता अनुगमन निरिक्षणको हाम्रो समिति छ्, त्यसको बैठक बसेर अनुगमन निरिक्षणको काम हुन्छ ।
कोरोना बीमाको भुक्तानी एक महिना पछि हुन सक्ने
२०७९ बैशाख ४, आईतवार १३:३६
विष्णु पाण्डेय, काठमाडौं । लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको कोरोना बीमा भुक्तानी प्रक्रिया अझै सुरु हुनसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट कोरोना बीमा बापतको रकम निकासा नहुँदा बीमितलाई बीमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बीमा समितिका प्रवक्ता निर्मल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अधिकारीका अनुसार सरकारले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम साढे १० अर्बको हाराहारीमा […]
२०७८ आश्विन २४, आईतवार १६:२९
लुम्बिनीमा १० मन्त्रीको शपथ, मन्त्रिमण्डल १७ सदस्यीय
२०७७ कार्तिक १७, सोमबार ०८:३३
पार्टी भित्रको विवाद समाधान गर्न नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय
२०७९ बैशाख ७, बुधबार ११:३८
भक्कानिएको मनबाट आएका प्रतिबद्धताहरु
२०७७ फाल्गुन २४, सोमबार ०८:०२
दाहाल–नेपालको स्थायी कमिटि बैठक बस्दै
२०७७ कार्तिक ११, मंगलवार ०७:००